Oovimba abagcina iPepsico (PEP)
Udidi: IPepsico (PEP)
I-Pepsico Stock ine-Fizz engakumbi yokuNika iZero-Calorie Push
Izabelo zePepsico (PEP) zinyukile ngama-50% ukusukela nge-Matshi 2020 ye-Covid nadir, xa ubhubhane wathengisa iimarike zestokhwe kwihlabathi liphela.
Okwangoku ukuthengisa nge-156 yeedola, uPepsico yeyona nkampani ingemva kwesiselo sePepsi cola kwaye sikholelwa ukuba ixabiso lesabelo salo linendawo yokukhula ngakumbi.
Ngo-1983, umsunguli we-Apple uSteve Jobs wahlasela umongameli wePepsi u-John Sculley, ngeyona ndlela intle ngayo yonke i-akhawunti, xa wayezama ukumrhwebesha ku-Apple, ngala magqabantshintshi adumileyo malunga nemveliso yayo: "Ngaba uyafuna ukuthengisa amanzi aneswekile ubomi bakho bonke okanye uze nam utshintshe umhlaba? ”
Njengoko usiko lwenkampani lusikhumbuza, imisebenzi yaphumelela emsebenzini wakhe, njengoko wayehlala esenza njalo, kwaye wamrhwebesha uSculley kude nePepsico.
Okungaphezulu kokuthengisa kumanzi aneswekile
Kodwa ukusukela ngeminyaka yee-1980 uPepsico sele engaphezulu nje kokucoca "amanzi aneswekile" njengoko imisebenzi yayiya kuba njalo.
Namhlanje iimveliso zenkampani zigubungela yonke into ukusuka kwizidlo, iziselo zamandla kunye nesondlo kwezemidlalo ukuya kwizidudu namanzi asebhotileni.
Ngamanye amagama iya isiba yinkampani yokutya neziselo eyahlukileyo kunokuba, umzekelo, imbangi yayo edumileyo iCoca-Cola.
Unoko engqondweni, kwiveki ephelileyo Daily Telegraph wakhankanya inyani yokuba omnye umntu weshishini kwishishini, umtyali mali odumileyo uWarren Buffett, wathi ngekhe athengise isabelo sesitokhwe seCoke.
Kufanelekile ukujonga indlela aqiqa ngayo.
Kwincoko yakhe nosihlalo we-Coca-Cola kunye ne-CEO u-Muhtar Kent kwintlanganiso kawonke-wonke yase-Berkshire Hathaway, uBuffett wathi: “Ndingumntu othanda ukubheja kwizinto eziqinisekileyo. Akukho shishini likhe lasilela kubathengi abonwabileyo… kwaye uthengisa ulonwabo. ”
"Ndiyathanda iimveliso ezintle," uqhubeke. "Ukuba ukhathalela uphawu olukhulu, lukanaphakade."
UBuffett, wayehleli kwibhodi yabalawuli beCoke iminyaka eli-17 kwaye inkampani yakhe yeyona inesitokhwe esikhulu eCoca-Cola.
Ke siyaphi nale nto? Ewe, njengeCoca-Cola, uPepsico unophawu olomeleleyo, kodwa njengoko iTelegraph isitsho, uPepsico "unika abatyali mali ithuba elingcono" kuba inephothifoliyo ebanzi yeemveliso kwaye ayigcini nje kwiziselo ezinjengeCoca-Cola.
Iimpawu ezomeleleyo zamaxesha anzima
Ngapha koko ishishini liqhayisa ubuncinci beemveliso ezingama-23 kwaye lineentengiselwano zokufumana iilayisensi kunye / okanye ubuhlakani obudibeneyo kunye nokuthandwa kwe-Starbucks, Oceanspray, Yum! Amanqaku, iLipton, uPapa John kunye noDole.
Kunye namandla ophawu lwayo, uPepsi wabelana noCoke inyani yokuba iimveliso zayo zisoloko zifunwa, nto leyo eyenza ukuba ibe sisisitokhwe esikhulu esinganyanzelekanga kwaye siyifanele njenge "ukubheja okukhuselekileyo" njengoko uBuffett echazayo xa ethatha iCoke.
Siyakubona oku ukuba sithatha ubhubhane njengomzekelo wokurhweba ngamaxesha anzima. Inzuzo yokusebenza kwenkampani khange iphoswe ukubetha, njengoko sibona ngezantsi:
Ngo-2017: $ 10.27 yezigidigidi
Ngo-2018: $ 07 yezigidigidi
Ngo-2019: $ 10.02 yezigidigidi
Ngo-2020: $ 9.85 yezigidigidi
Inzuzo kaPepsi ka-2021 elandela iinyanga ezilishumi elinambini (TTM) yi- $ 11.05 yezigidigidi.
U-Pepsico ulawula umngcipheko wexesha elizayo ngesicwangciso-buchule seswekile esezantsi kunye nokutyhala kotywala
I-Pepsico ikwayinkampani ye-nimbler kune-Coca-Cola, xa kufikwa ekuhlaleni ngendlela, umzekelo, ukunciphisa umngcipheko ovela kumalinge karhulumente okulwa ukutyeba efuna ukunciphisa ukusetyenziswa kweswekile.
I-Pepsico iye yonyusa ngokuthe chu inani leziselo ezineswekile esezantsi kwipotifoliyo yayo, njengoko sele sibonile, ngaphaya kokunaba kokuqhubeka nokunikezela kwayo kubathengi.
Kwinyanga ephelileyo kuphela bekukho ubungqina obubonakalayo bokujonga phambili kubaphathi.
Nge-10 ka-Agasti yabhengeza ukuba kungekudala izakube isungula isiselo esinxilisayo phantsi kwegama leNtaba-Dew ngokudibana neNkampani yeBhiya yaseBoston.
Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba kolusungulo oluthile lwalulandela kumanyathelo okhuphiswano lwayo olusekwe eAtlanta- uCoca-Cola wasungula isiselo esinxilisayo sokuqala kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Isiselo esitsha asiqali de kwangoko kunyaka olandelayo kwaye okwangoku sise-US kuphela.
Into enomdla malunga "Nombethe weNtaba Olukhuni" njenge-malt-based citrus-flavored 5% isiselo esinxilisayo siyakubizwa ngegama, sisandi sayo seencasa zabantu abancinci.
“Siyazi ukuba ukuthanda kwabantu abasele bekhulile kuyaguquka, kwaye bona
bajonge iziselo ezintsha nezonwabisayo, ”uBoston
Umphathi omkhulu weBhiya uDave Burwick uthe kwingxelo ehamba nesibhengezo.
Kwaye ngaphambili kokutyeba kakhulu, uPepsico ukwenzile-ngeli xesha ngokuthengisa iimveliso zayo zejusi zeTropicana kwiziko labucala laseFrance i-PAI Partners nge-3.3 yezigidigidi zeedola.
Sicinga ukuba i-pivot kwi-zero-khalori iyavakala kwaye nangona ixabiso lentengiso belikwicala eliphantsi kukuhamba okufanelekileyo.
Ingeniso hit $ 34 billion kwisiqingatha sokuqala
I-Pepsi ehlanjululwe ingeniso ngesabelo ngasinye yi-6.59 yeedola kwisiseko se-TTM, inyuka isuka kwi-6.29 yeedola ngo-2020 kunye ne-5.77 yeedola ngo-2019. Izabelo zayo zikhuphukile minyaka le ukusukela ngo-2015 kwaye ngoku zivelisa i-2.61% (ngelishwa umhla we-div u-2 Septemba).
Kwingeniso yayo yamva nje, kwiiveki ezingama-24 ukuya kwi-12 kaJuni ingeniso ikhule nge-14% yaya kuthi ga kwi-34 yezigidigidi zeedola, ngelixa umvuzo opheleleyo utsibe nge-36% ukuya kwi-4.07 yezigidigidi.
Isinye kwisithathu sengeniso sivela e-US. Elona zinga liphezulu lokukhula kwengeniso labonwa kwi-Asia Pacific, Australia, New Zealand kunye nase China, nge-74% inyuka yaya kwi-2.0 yezigidigidi.
Imvumelwano yomrhwebi evela kubahlalutyi abangama-22 abagubungela isitokhwe kukuthenga ngexabiso ekujoliswe kulo le- $ 165.55, elimele i-5.6% yeprimiyamu ngaphezulu kwexabiso langoku.
Nangona kunjalo, sibona amaxabiso esabelo ngaphezulu anyusa isuka kwi-zero-calorie push yayo kwaye isiya kwiziselo ezinxilisayo.
Sikala uPepsico ukuthengwa okunamandla kwexesha elide kubatyali mali abafuna isitokhwe esinokuzikhusela esineemarike ezomeleleyo ezinokukhuselwa kunye nokukhula okunokubakho.
Ungathenga iPepsico kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini.
tags ukutya kunye neziselo esitokisini, IPepsico (PEP)